Saddlebags plastic Side libhayisikili (bheka isithombe). saddlebags Lateral izithuthuthu ngezandla zabo
Namuhla emigwaqweni kaningi kakhulu ungathola izithuthuthu - lolu hlobo zokuthutha isikhathi eside akekho futhi akumangalisi lokhu. Ungabona kokubili zakudala kanye models ezemidlalo - futhi ngezinye izikhathi ngisho choppers zikanokusho ngesihluku. Lena yindlela elula kakhulu yokuthutha uma wazi kanjani ukushayela ngendlela efanele. Ukuze wenze lokhu kufanele ukubheke ahlukene kwamalungelo, ngakho akunakwenzeka uzothola umuntu ngendlela embi ukushayela izithuthuthu. Nokho, omunye inkinga kwalolu hlobo ezokuthutha uhlale baqonde izinto ezenzekayo kakhulu - kungcono isikhala wezimpahla. Ukuze aqinisekise okungenani ezinye isikhala ukuthuthwa kwezimpahla, uzodinga ukuthenga ehlukile saddlebags ohlangothini plastic izithuthuthu - kodwa izinto zokuqala kuqala.
Ngakho, ngaphambi kokucabangela ethize saddlebags ohlangothini plastic libhayisikili, kufanele kubhekanwe nendaba yezokuthutha kuleli imoto ngokomthetho. Iqiniso lokuthi ezinye emabhayisikili ngokuvamile ayiyona le njongo - isibonelo, ezinye onobuhle endleleni yakudala ngokwabo Ziningi kancane engaphezu kwekhulu khilogremu, ngakho lokhu bike wena ikakhulukazi angeke athwale imithwalo abalulekile. Kodwa kukhona isithuthuthu omkhulu onamandla, okuyinto lutho, uma uthatha emashumini ambalwa amakhilogremu wezimpahla. Kodwa umbuzo uwukuthi - kuphi akubeka? Ngemva isithuthuthu ngokwalo akanayo isikhala isitoreji. Yini okumelwe uyenze? Kulokhu, uyosindisa iziqukathi ekhethekile, ababiziweyo plastic lateral saddlebags for izithuthuthu.
Ngokushesha kufanele licaciswe ukuthi akukho kuphela saddlebags ohlangothini plastic izithuthuthu - bangaba nobuhlobo naye babe ezihlukahlukene kakhulu. Ngokwesibonelo, impahla zingase zihluke, kodwa plastic - ke ukhetho enokwethenjelwa kakhulu futhi ngempumelelo. Kodwa uyaqhubeka material isiqu esincane kamuva - manje ukunakwa kufanele kugxile ngokunembile kuzinhlobo isiqu ezikhona. Ngaphezu ohlangothini uzophinde uhlangabezana iziqu phezulu futhi bakhulise - konke kuncike lapho eqondiswa isithuthuthu. Njengoba ungase ucabange, zonke iziqu zingafakwa nje ngemuva umshayeli (nomgibeli, uma ikhona) esihlalweni. saddlebags Lateral, yeka indlela okungaba lula ungakwazi ukutshela kusuka igama, zitholakala ezinhlangothini libhayisikili, kuyilapho isiqu engenhla itholakala ngqo emva abagibeli, nengxenye yalo engemuva - ezingemuva isithuthuthu. Ngakho, wena ngokwakho bangakhetha lapho kuzoba imoto yakho bay, kanye inombolo yetintfo kanye nosayizi wezimpahla. Kodwa manje sikhuluma saddlebags ohlangothini plastic isithuthuthu - yilokho abayikho, ukuba benzeni, indlela ukubophela nokunye.
Saddlebags ohlangothini plastic isithuthuthu, njengoba kuye kwashiwo phambi - lena ngenye yezindlela elula kunazo ukuthutha izimpahla ngokuyinhloko ukuze imoto. Basuke ngokuphephile nasezinsikeni ezinhlangothini, musa hlala isikhala emzimbeni, futhi okubaluleke - uma lisetshenziswa pair ungawakhi ukungalingani. Ngakho, nikwazi ukuthwala kabili njengoba leya ngcebo kakhulu kunezinye ipotimende ahlukene phezulu noma labaqaphi elingemuva. Yiqiniso, uma isithuthuthu yakho uyakuvumela lokhu, ungasebenzisa zisuka zonke izinhlobo izitsha, kodwa kufanele aqaphe ukuze agweme ngokweqile isithuthuthu sakho - ngokuvamile iphakethe esinjalo efanelekayo izithuthuthu kuphela babuka ukuthi ahloselwe ngokukhethekile for ekufudukeleni emajukujukwini omhlaba futhi kuthuthwe ngendlela ephephile imithwalo esindayo. Ngakho-ke, uma uthenga ohlangothini saddlebags Yamaha isithuthuthu noma yimuphi omunye, ungasebenzisa kubo ngoba amaphesenti ayikhulu.
Uma sicabanga ohlangothini saddlebags izithuthuthu Yamaha, lapha kwasekuqaleni ushaya ukusebenza izigubhu zabo. Bona angazamukela eningi imithwalo amancane ngisho izinguqulo ezithile wosayizi omkhulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele sinake yokuthi e igadle kwezwakala nasezimalini ezithile ukuhlangabezana linezingxenye esikhethekile izinto ezincane, okubenza babe functional nakakhulu. Ngakho, wena uyokwazi ngokuphumelelayo ukusabalalisa yonke impahla yabo amagatsha coffer yakho ukuze ke hhayi ukuze ulayishe konke okuqukethwe ukuthola into eyodwa, futhi ngokukhululekile uzulazule ohlelweni USB. Njengoba ubona, the saddlebags ohlangothini izithuthuthu zingase zishintshe kakhulu komunye nomunye ngokuya ukusebenza, ngakho nakanjani ungakhethi kubo kuphela ekubukekeni.
Inkomba esemqoka ukuthi ungaba ohlangothini saddlebags izithuthuthu Givi nezinye kwenza kanye tinkhulumo - kuyinto ivolumu. Nguye onqumayo ukuthi kungakanani ongakusho angena. Kunezinhlobo ezimbili izinhlangothi mayelana nodaba - ngakolunye uhlangothi, yenqwaba ikuvumela ukuletha izinto eziningi, kodwa ngakolunye - usayizi encane ayenzi isithuthuthu yakho nzima kakhulu. Ngakho lokho onakho bakhethe ethize - ukuthi kubalulekile kuwe. Kodwa kuyafaneleka ukuthi ivolumu ziyahlukahluka nje ngendlela emangalisayo okuningi. Ngokuvamile iziqu uhlangothi ube isilinganiso ivolumu 25 kuya 35 amalitha. Kodwa ungathola labo. Okuzokwenziwa anakekele cishe amahlanu amalitha. Kulokhu, kufanele uqonde ukuthi lezi iziqu kukhona okukhulu kakhulu, ngakho uma udinga ukuthi lemali, kungcono ukulihambisa phezulu noma isiqu ezingemuva futhi ohlangothini setha coffer amathathu amalitha amabili. Umphumela walokhu uyoba ngcono kakhulu, ngakho kufanele ibekwe eceleni saddlebags for izithuthuthu. Izithombe zalesi yokuhlala kungabonwa yonke indawo, awukwazi ngisho ukucinga izithombe sihlolisise emigwaqweni. Isikhathi esining impela ungathola izithuthuthu kanye hhayi enkulu isiqu ezilingene enkulu phezulu ikhabethe isiqu (noma iyodwa).
Yiqiniso, kufanele sikunake lokho izobukeka ngohlangothi lwakho saddlebags. Ukuze uthole isithuthuthu "Ural" akunakwenzeka uzokwazi ukuthola izinguqulo nemfashini, zikanokusho yesimanje, kodwa brand ebanda kunazo ukwenza kungenzeka lokhu. Ngokuvamile, uyakwazi ukuthola iziqu ulula, okuyinto zipendwe ngombala owodwa futhi obonakala khulu. Kodwa uma ufuna amehlo kubo, ungathenga izinguqulo ezinemibala ehlukahlukene - noma leyo Airbrush imidwebo. Kodwa okuhle kakhulu uma ukuphishekela isitayela, kukhona iziqu, okuyinto zipendwe-chrome. Omunye uthola umuzwa wokuthi laba bagibeli iziqukathi - kuyinto ephelele-chrome ukwandiswa ngesithuthuthu yakho. Ukuze igadle kwezwakala nasezimalini lateral kuyoba ephelele, kodwa phezulu futhi emuva kwalesi Umbala uyobheka akuyona umxhwele kakhulu.
Kufanele futhi sikhulume mayelana igadle kwezwakala nasezimalini obandayo ukuze ngesithuthuthu. Iqiniso ukuthi ukukhiqizwa lezi iziqukathi bahlanganyele ezimele kusukela ukukhiqizwa inkampani izithuthuthu, ukuze sikwazi kugcwale umlomo ukuthi i-igadle kwezwakala nasezimalini kukhona jikelele. Ezimweni eziningi, zingase enamathiselwe cishe kunoma iyiphi ibhayisikili, okubenza babe ekahle ukuthuthwa kwezimpahla kwalolu hlobo izimoto. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi akuzona zonke iziqu kungenziwa ogibele zonke izithuthuthu - kodwa inkinga. Phela, ngokuphelele ngaso sonke isikhathi, uma lolu godo hhayi jikelele, abadali supply ngayo ubakaki ekhethekile, okuyinto kukhethwe ngqo imodeli of ngesithuthuthu osivezile. Ngakho, noma iyiphi isiqu iba jikelele ngaphandle kwezinkinga, ukuze ukwazi ngokuphepha yithathe, hhayi ukugxila injongo yako, futhi benaka kuphela izici ezibalulekile.
Njengoba sekushiwo ngenhla, ukwaziswa kwekhethelo kusukela lapho igadle kwezwakala nasezimalini ohlangothini isithuthuthu kungenziwa ekhiqizwa - plastic. Ungacabangi ukuthi lena plastic Chinese ezishibhile (Yiqiniso, uma ungenawo ukuthenga ezishibhile iziqu ze-Chinese), njengoba inkampani ehola ukwenziwa iziqukathi esinjalo isithuthuthu ukusetshenziswa kuphela esezingeni materials. Lokhu kusho ukuthi plastic kuyisimo okuthembekile, ukushaqeka nemithi, ngeke sizoshwabana ku ayengakaze ahlangane nabo. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile usenayo ukumelana namazinga okushisa aphakeme, okuyinto ebaluleke kakhulu uma une isikhathi eside ukuya e ngqo elangeni elishisayo. I plastic akusho ancibilike, akusho wafiphaza, futhi ubukeka nje ephelele, ngisho nangemva isenzo ezishisayo. Konke lokhu kungenxa yokuthi ama-plastic ekhethekile kwagcizelela impahla polymeric, ukuhlinzeka lenyuka amandla nokuzinza.
Kukhona ezinye izici okufanele uzicabangele uma uzothenga saddlebags for ngesithuthuthu yakho. Ngokwesibonelo, kufanele ucabange kangaki kufanele ukugibela emvuleni noma frost esindayo. Phela, kukhona iziqu ezikhethekile ukuthi zenziwa, isibonelo. izinto manzi, ukuze ukwazi ukuhamba ngisho ngokuphepha ngaphansi imvula iningi - ungayeka ngisho umfula, igadle kwezwakala nasezimalini yakho ngeke akuvumele umswakama, futhi ngeke imoto yakho bunjalo. I Kungashiwo okufanayo mayelana abandayo - ukuthenga saddlebags ukuthi zifakwa nge Ukushisa umsebenzi, ukuze izimpahla zakho ngeke ahlupheke noma yimuphi umonakalo. Ngakho, nawe nakanjani kudingeka sicabange ngalokho ncamashi ukhetha iziqu, ngoba abaningi kubo izici ezithile ukuthi kungenzeka nesithakazelo kuwe.
Ngakho uke wanquma ukuthenga i icala esithwele, futhi esimweni ohlangothini izinguqulo - a igadle kwezwakala nasezimalini ambalwa. Lokho kufanele sinake? Udinga ukuba bathuthukele Uwafunde ezingaphathelana ngempela izofakwa ohlwini njengoba kuwebhusayithi futhi ezitolo. Into ebaluleke kakhulu kubo - Yebo, ubukhulu. Udinga ukufunda nabo futhi ngeso lengqondo indlela la iziqu kuyoba ngebhayisikili yakho. Nakani kokubili ukuphakama futhi ububanzi nobude - konke okungaba ongowenani elikhulu phakathi nokufaka. ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe inani coffer, njengoba kuba isici esibaluleke kakhulu, kodwa ungakhohlwa ukuthi ivolumu asichazi zonke - isibonelo, ukubaluleka eliphezulu futhi coffer umthamo. Angase akhethe ukuthi amalitha amathathu ivolumu, kodwa amandla alo kuyoba amakhilogremu eziyishumi. Ungase futhi banake kangakanani uzakubenze nesisindo umzimba, njengoba iziqukathi esinda kakhulu akufanele ukuthenga - bangase liphazamisane Dynamics ibhayisikili lakho, ikakhulukazi uma yena ngokwakhe engeyena likhulu kakhulu futhi ezisindayo.
Ungenza ohlangothini saddlebags kuya isithuthuthu ngezandla zakho, uma uthanda ukuyithatha, yithathe, kodwa ukuthi udinga ezinye izitsha kanye zalapho ukuthi ungakwazi ngokuqinile unamathisele isitsha ngesithuthuthu. Nokho, namanje Kunconywa ukuthenga saddlebags onokwethenjelwa futhi izinga kusuka abakhiqizi omethembayo - awayona ayebiza kangaka, kodwa ukuqinisekisa ukuphepha mpahla yakho kanye nokubukeka omuhle kakhulu ngesithuthuthu yakho.
Yamaha V Max - izithuthuthu zakudala
ATV "Stealth-300" kanye nezici zayo
Triumph Bonneville - isithuthuthu umlando, racer futhi movie yayo uhlamvu
Futures - Iyini? Kangakanani ikusasa zokuhweba?
Odinga ukukwazi mayelana nentaba-mlilo Loa. Memo izivakashi Hawaiian
Amandla Ummeli mail: nezidingo okuqukethwe
Izidakamizwa "Differin": ukubuyekeza nokusebenzisa
Ukudla okunama-kilojoule amancane ukuthi ashise amanoni
Indlela yokuthola isisindo?
Seaside Beach Ihhotela 2 Ihhotela: incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Isidakamizwa "i-Ursofalk" (ukumiswa). Abstract
Indlela yokwenza pedicure ekhaya? amathiphu alula amantombazane
Iwayini Mateus ( "Mateusz"): Mateus Rose, Mateus White Wine. iwayini Portuguese